2014 – Year – Alpha Premium
Modern Farmer (20ပိုင္း) စ/ဆံုး ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ ရော့ခ်အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လီမင်ဂီဆိုတာက အကောင်းဆုံးသောစိတ်ဝိညာဉ်များ(Exo) ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သီချင်းဆိုသူ ဂီတာသမားလဲဖြစ်ပါတယ် သူဟာ ဟန်ဂီဂျွန်းဆိုတဲ့ဒရမ်သမားနဲ့အတူအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အတ္တကြီးတဲ့ဂန်ဟော့ကတော့ အဖွဲ့ရဲ့စန္ဒရားသမားဖြစ်လဲ ဆရာဝန္မိသားစုကေမြးဖြားလာတဲ့ ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ယူဟန်ချောကတော့ဘယ်သန်လျှစ်စစ် ဂီတာသမားဖြစ်ပါတယ် မင်းသားနှစ်ယောက်မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းကို တွေ့မြင်ရမှာပါ
Line Romance အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ lee min ho ရဲ့ mini series လေးတခုပါ3ပိုင်းသာပါဝင်ပြီး တပိုင်းကို 15 မိနစ်စာဝန်းကျင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Romance ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ် 2014 Line app ကို ပရိုမိုရှင်းဆင်းတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ကားကောင်းလေးပါ။ တရုတ်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတာလေးပေါ့။ အမှတ်မထင်ဆုံပြီး Line app ကျေးဇူးကြောင့် ဖူးစာဆုံသွားတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့။ “ဘာသာစကားတွေမတူ နဘေးမှာ မရှိပေမယ့် အချစ်တွေကို Line နဲ့ပျော်ရွှင်စွာ အဆုံးသတ်ပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လေလှိုင်းကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြထားတာပါ။ အခုလို Stay Home နေချိန်မျိုးမှာ လေလှိုင်းပေါ်က အလွမ်းသည်နေတဲ့ ချစ်သူတွေ၊ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေ၊ friend zone က ရုန်းထွက်ချင်နေသူတွေ ဒီကားလေးထဲက နည်းလမ်းလေးတွေ ယူသုံးနိုင်ဖို့ ကြည့်သင့်တယ်နော်။
Z Nation Season 1 to Season5Season 1 : 13 Episodes Season2: 15 Episodes Season3: 13 Episodes Season4: 13 Episodes Season5: 13 Episodes လမ္းေလ်ာက္သရဲကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ The Walking Dead လိုကားမ်ိဳးႀကိဳက္တဲ့သူေတြ သေဘာက်ၾကမွာပါ။Z Nation ကလည္း သူဟာနဲ႔သူ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ Season5ထိထြက္႐ွိၿပီး ၿပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ
The Last Ship ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း (စစ်အက်ရှင်နှင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု့တွေအပြည့်အနှက်ထွေမွှမ်းထားတဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ခုကြည့်ရှု့ချင်သူပရိတ်သတ်များအတွက်….) The Last Ship ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် Wliiiam Brinkley 1988 ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ The Last Ship ဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ. သည်းထိတ်ရင်ဖိုလျှို.ဝှက်ဆန်းကျယ်အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ သည်းထိတ်ရင်ဖို လျှိ့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ သဘောတရားအရ ကြည့်ရှု့သူကို အသည်းတလှပ်လှပ်ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ထိုင်ရာမထတမ်းကြည့်ရှု့နိုင်စေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု့မျိုးကို အပြည့်အဝရရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု့မျိုးနဲ့ The Last Ship စီးရီးကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မြန်မာ ပရိတ်သတ်နဲ့မစိမ်းလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Eric Dane (Underworld, Spartacus,Doomsday)တို.မှမင်းသမီးချော Rhona Mitra တို.က အဓိကဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်.။ အမေရိကန်သမ္မတရဲ.လျို.ဝှက်စေခိုင်းမှုအရ ကပ္ပတိန် Chandler ဦးစီးတဲ.သဘောင်္သား ၂၁ရယောက်ပါဝင်သော အမေရိကန်စစ်သဘောင်္Natha James ဟာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Rachel နှင်.အတူအာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ လူသားမျိုးနွယ်စုကို အမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုကိုသွားရောက်ရှာဖွေနေတဲ.အချိန်မှာပဲကမ္ဘာကြီးရဲ.၈ဝရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ.ရပါပြီ။ အစိုးရအဖွဲ.အစည်းနဲ.လည်းအဆက်အသွယ်မရအခြားနိုင်ငံမှရန်သူတွေရဲ.တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြပြီး လူ့လောကကြီးကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော ...
Outlander Outlander (2014) TV Series =================== မြန်မာစာတန်းထိုး (အမှန်) (720p) ======================= IMDb - 8.4/10 Genres: Drama | Fantasy | Romance Outlander ကတော့ IMDb rating 8.4 ရထားတဲ့ အရမ်းကြည့်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ ဇာတ်ကားက ၂၀ရာစု ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးအချိန်နဲ့ ၁၇ရာစုလောက်ကြားမှာ Time Travel လုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းမို့ စိတ်ဝင်စားစရာသမိုင်းတွေအပြင် အချိန်ခရီးသွားတွေ မှော်ဆန်မှုတွေပါဝင်မှာပါ။ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ ကလဲရ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသူနာပြုမိန်းကလေးပါ။ သူက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲအပြီးမှာတော့ ငါးနှစ်တာဝေးနေခဲ့တဲ့ သူ့ခင်ပွန်းနဲ့ စကော့တလန်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ စကော့တလန်က အင်ဗာနက်စ်မြို့မှာ မှော်ဆန်တဲ့နေရာတစ်ခုကို သွားမိရာက ကလဲရ်တစ်ယောက် ၁၇ရာစုကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ရာစုမှာ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ စကော့လူမျိုးတွေ စစ်ဖြစ်နေချိန်ပါ။ အင်္ဂလိပ်မလေး ကလဲရ်ကတော့ စကော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကလဲရ်တစ်ယောက် ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုကိုတောင် နားလည်ပါ့မလား။ သူ့ခင်ပွန်းဆီ အပြန်လမ်းရောတွေ့ပါ့မလား။ စကော့အဖွဲ့ထဲမှာရော ကလဲရ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေစွန့်စားရုန်းကန်ရမယ် ...
TMDb: 7.7/10 865 votes
The 100 IMDB ရော Rotten Tomato ရောမှာ Rating ကောင်းကောင်းရနေတဲ့ Sci-FI အမျိုးအစား Serie လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ။ The 100 ဆိုတဲ့ Series လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ ။ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလွန်ကဲပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားတွေအချင်းချင်း နျူတိုက်ပွဲတွေဆင်နွဲရင်းကနေ ကမ္ဘာကြီးဟာရေဒီယိုသတ္တုကြွဓာတ်ရောင်ခြည်တွေသင့်ကာ သက်ရှိတွေသေကြေပျက်စီးကြပြီး နေထိုင်လို့မရတော့လောက်အောင်အထိ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းကြီးကြုံခဲ့တယ် ။ အဲ ဒါပေမယ့်လူသားတွေအနေနဲ့ အာကာသထဲထွက်ပြေးဖို့ဆိုတဲ့ အဖြေရှာတွေ့ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုတွေ ပျက်ပြယ်သွားတဲ့အခါမှ ပြန်လာကြမယ်ဆိုပြီး နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ လူသားတွေဟာ အာကာသစခန်းတွေတည်ဆောက်ပြီး အာကာသထဲလွတ်မြောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ၉၇ နှစ်အကြာကိုရောက်သွားတဲ့အခါ သူတို့မှီတည်နေထိုင်ရတဲ့ အာသာကစခန်းဆိုတာကလည်း သူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေရှိလာခဲ့တာပေါ့။ ဆိုတော့ကာ လူတွေရဲ့ အဓိကရှင်သန်မှီဝဲရာဖြစ်တဲ့ အစားအစာ အောက်ဆီဂျင် (အဓိကကတော့ အောက်ဆီဂျင်ပေါ့) သက်တမ်းပိုခံဖို့အရေးမှာ ရာဇဝတ်သားဆိုတဲ့ သက်ရှိတွေက အစတေးခံ စဖြစ်လာကြတော့တာပေါ့ ။ ဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲ ရာဇဝတ်သား ၁၀၀ ကို အာကာသစခန်းကနေ ...
TMDb: 7.4/10 2918 votes
Witch’s Romance (16ပိုင္း) စ/ဆံုး 9နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အပျိုကြီးBan Ji-yeon(Uhm Jung-hwa)ဟာ သတင်းထောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။သူမအလုပ်ကသာ လျှင် ဘဝမှာအရေးအပါဆုံးဖြစ်ပြီး အဲဒီ့လိုအလုပ်ဂျိုးကပ်နေတာကို သူငယ်ချင်းတွေက နောက်ကွယ်မှာ စုန်းမလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါသေး တယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးရည်းစား 41နှစ်အရွယ် ဓာတ်ပုံဆရာ Noh Shi-hoon (Han Jae-Suk)ဟာ မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်သာ သူမဟာ အချစ်ကိုငြီးငွေ့စိတ်ကုန်နေ ပြီး အလုပ်ပေါ်မှာသာအားလုံး ပုံအောထားပါတော့တယ်။ Yoon Dong-ha (Park Seo-joon)ကတော့ 25နှစ်ချာတိတ်ဖြစ် ပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ စတိုးဆိုင်လေးမှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။သူတို့စတိုးဟာ customerတစ်ယောက်ကို Santa Clausကနေ Idolဖြစ်တဲ့အထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။Dong ha ဟာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပေါ်ပေမယ့် သူ့ရည်းစားနှလုံးရောဂါသည် ဆုံးပါးပြီးတဲ့နောက် ခံစားချက်ကိုဖုံးကွယ်သိုဝှက်ထားတတ်သူရယ်ပါ။သူမ သေပြီးတည်းက သူ့ရည်မှန်းချက်တွေ၊အလုပ်အကိုင်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Ji-yeonနဲ့ Dong-ha တွေ့ဆုံပြီး အသက်အရွယ်ကွာပေမဲ့ သူတို့နှလုံးသားတွေကိုဖာထေးပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်တွေကိုပါ ရှာတွေ့သွားတဲ့နောက်….. Castsတွေအနေနဲ့ကတော့ Ban Ji-yeonအဖြစ် Wonderful nightmare ဇာတ်ကားထဲက မမUhm ...
Beyond the Clouds Beyond the clouds (2014) ========================== (16ပိုင္း)စ/ဆံုး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း - မင်းသား က နိုင်ငံခြားရာထူးဝန်စာမေးပွဲဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက် ... ပြောရရင်တော့ ဘဝကိုရိုးရိုးသားသားနေဖို့ ဆန္ဒရှိပြီး အလုပ်သိပ်ကြိုးစားတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ ... ဒါပေမယ့် မင်းသားအဖေက ကျတော့ ခိုးဆိုးလိမ်ညာမှုတွေမကင်းတဲ့ ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက် ... လောလောဆယ် ထိုင်းမှာပုန်းခိုနေပြီး အကြီးစားစိန်ခိုးမှုအရေးအခင်းထဲ ပါဝငပတ်သက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ... အဲ့လို မင်းသားအဖေကနေမှ သားတစ်ယောက်လိုပျိုးထောင်ပေးထားတဲ့ မင်းသားရဲ့ညီအစ်ကို တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် ... သူကကျတော့ မင်းသားအဖေဆီကနေ မှောင်ခိုကုန်ကူးမှု လှည့်ကွက်တွေသင်ယူတတ်မြောက်ထားတဲ့ ကျောက်မျက်မှောင်ခိုခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ... အဲ့လိုနဲ့ ဘန်ကောက်က ကျောက်မျက်အရောင်းပြပွဲမှာ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိ မတော်တဆဖြစ်ပြီး မင်းသားအဖေ သေဆုံးသွားတယ် ... ဖြစ်ချင်တော့ မင်းသားကလည်း တခြားသူတစ်ယောက်ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မှုခင်းနေရာမှာရှိနေတာနဲ့ တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲခံရပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရတယ် ... ဒီလိုနဲ့ ထိုင်းအကျဉ်းထောင်မှာ ငါးနှစ်ထောင်ကျပြီး ပြန်လွတ်လာတော့ မှတ်ပုံတင်အတုနဲ့ သူ့အဖေလိုမျိုး လူလိမ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလေရော ... ...